Supernatural – MMANIME
Natsume’s Book of Friends Movie(2021) ဒီ Movie လေး က‌ တော့ 2021 မှာ ထွက် ထား တာ ပါ Movie ဆို ပေ မဲ့ 24 မိ နစ် စာ နှစ် ပိုင်း ကို ပေါင်း စပ် ထား တာ ပါ ပဲ Natsume ဆို တဲ့ အ တိုင်း ပဲ Ayakashi အ သစ် တွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံ ခွဲ ခွာ ရ တဲ့ အ‌ ကြောင်း ပဲ ပေါ့ ပ ထ မ တစ် ပိုင်း က တော့ Ishiokoshi(ကျောက် တုံး နှိုး သူ) တဲ့ ဒါ လေး က ...
Natsume’s Book of Friends Movie(2021)
Fate/Grand Order: The Movie – Divine Realm of the Round Table: Camelot – Wandering; Agateram Camelot ဟာ Fate Grand Order ၏ ၆ခုမြောက် Singularity လည်းဖြစ်သလို ဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာ Babylonia ပြီးရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ( ဒီထဲမှာတော့ Rush ထားပေမယ့်ပေ့ါ) ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အေဒီ ၁၂၇၃ မှာ တော်ဝင်နယ်မြေအဖြစ် သမုတ်ကြတဲ့ ဂျေရုဆလင်ဟာ ရုတ်တရတ် ကြီးမားတဲ့ ကန္တာရအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကြောင့် မူလနေထိုင်သူများဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ အဓိကအင်အားကြီး အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့လည်းစစ်ခင်းနေကြပါတယ်။ စားပွဲဝိုင်းသူရဲကောင်းတွေနဲ့အတူ ဂျေရုဆလင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး တော်ဝင်မြို့အဖြစ်ပြန်ဆောက်ကာ နန်းစံလျက်ရှိတဲ့ ခြင်္သေ့ဘုရင် ...
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train Review Tanjiro Kamadoရယ် တောဝက်တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ တောဝက်ခေါင်းစွပ်နဲ့Inosuke Hashibiraရယ် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အစွမ်းအစစ်အမှန်ကိုထုတ်ပြသလောက် အရမ်းလည်းကြောက်တတ်တဲ့Zenitsu Agatsumaတို့ဟာ မီးတောက်Hashiraလို့တင်စားကြတဲ့ Kyojuro Rengoku နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းကာ အနန္တရထားပေါ်ကိုလိုက်ပါစီးနင်းပြီးလူတွေကိုသတ်ဖြတ် မိစ္ဆာသတ်သမားတွေကိုလည်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကို ရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲ….ဒီမိစ္ဆာကကော ဘယ်လောက်တောင်အစွမ်းထက်လဲဆိုတာကတော့….ဆက်လက်ရှုစားလိုက်ကြပါခင်ဗျာ… Translated and Encoded by Oke Hmue Ko
Fate/stay night: Heaven’s Feel III. Spring Song ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Lost Butterfly မှာSakura တစ်ယောက်လုံးဝ အသွင်းပြောင်းသွားရာကနေစထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ufotable ရဲ့လက်ရာဆိုတဲ့အတိုင်း Animation ကတော့ပြောစရာမလိုအောင် God-tier အဆင့်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အထူးမှာချင်တာကတော့ ဇာတ်လမ်းကိုသေချာနားလည်ချင်ရင် ရှေ့ ၂ ကားရယ် Fate Zero ကိုသေချာပြန်ကြည့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ နားမလည်နိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတချို့ကိုတော့ ကျွန်တော်Note နဲ့နားလည်သလောက်ပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်။
IMDB: 8.1/10 501 votes
Natsume’s Book of Friends: Sometime onaSnowy Day (2014) ဒါ လေး က ဘယ် Season နဲ့ မှ မ သက် ဆိုင် တဲ့ အ ထူး Episode လေး တစ် ခု ပါ . နှင်း ကျ ပြီး ချမ်း အေး တဲ့ နေ့ လေး မှာ နှင်း လုံး နဲ့ တူ တဲ့ Ayakashi တစ် ကောင် ကို အ ကြောင်း ပြု ပြီး လူ့ ဘ ဝ အ ကြောင်း ကို နှိုင်း ယှဉ် ပြ သ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် . "သင် ဟာ တစ် ဘ ဝ တာ လုံး ဘယ် ...
Natsume’s Book of Friends: Sometime onaSnowy Day (2014)
Noblesse: The Beginning of Destruction ဒီ Overpower MC ကိုတော့ မသိတဲ့သူရှားမှာပါ 2015 က ထွက်ထားတဲ့ ဒီ movie က Noblesse series ရဲ့ အစလို့ပြောလို့ရသလို MC ဖြစ်တဲ့ Raizen နဲ့ သူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း Muzaka တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Movie ကတိုတဲ့အတွက် အများကြီးပြောပြရင် spoil သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ် Series ကြည့်ဖို့စဥ်းစားနေတယ်ဆိုရင် အရင်ကြည့်ထားသင့်တဲ့ movie တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Download Link Mega Download link